Bit By Bit - Running nemaresiphi - 4.6 Iseluleko
Kungakhathaliseki ukuthi wenzani-ke wena noma ukusebenza nomlingani, ngingathanda ukunikela izingcezu ezimbili iseluleko Ngithole ziwusizo ngokukhethekile emsebenzini wami siqu. Okokuqala, cabanga ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuba noma iyiphi idatha sebuqoqiwe. Lesi seluleko cishe ibonakala isobala abacwaningi ejwayele egijima nemaresiphi kodwa kubaluleke kakhulu kubacwaningi ejwayele ekusebenzeni big imithombo idatha (bheka iSahluko 2). With big imithombo idatha yibona ababenza umsebenzi omningi kwenzeka emva une idatha, kodwa ukucwaningwa abonisa okuphambene; yibona ababenza umsebenzi omningi okufanele kwenzeke phambi kwakho ukuqoqa idatha. Enye yezindlela ezingcono kakhulu ukuba bophezela acabangisise design yakho kanye nokuhlaziywa ukwakha futhi ukubhalisa uhlelo analysis for ukuhlolwa kwakho. Ngenhlanhla, eziningi kakhulu nemikhuba analysis of idatha lokuhlola luye selicaciswe ku imihlahlandlela nokubika, futhi lezi ziqondiso kukhona indawo enkulu ukuqala uma udala analysis plan yakho (Schulz et al. 2010; Gerber et al. 2014; Simmons, Nelson, and Simonsohn 2011) .
I yisiyalo sesibili siwukuthi akekho experiment omunye abazobe ephelele, futhi ngenxa yalokho, kufanele sizame ukuba aklame uchungechunge ucwaningo ukuthi baqinise nomunye. Ngalalela ngisho lokhu kuchazwa ngokuthi isu armada; kunokuzama ukwakha eyodwa yempi omkhulu, ungase ube wokwakha eziningi abangcono imikhumbi ezincane izimfanelo aphelele. Lezi zinhlobo multi-experiment izifundo kukhona routine kwengqondo, kodwa awavamile kwenye indawo. Ngenhlanhla, izindleko eliphansi ezinye nemaresiphi digital kwenza lezi uhlobo multi-experiment study lula.
Futhi, ngithanda ukuba anikele izingcezu ezimbili iseluleko okungabonakali ovamile manje kodwa kuqakathekile kakhulu ukuklama digital yobudala nemaresiphi: ukudala zero nedatha yezindleko eziseceleni nemibhalo ukwakha izimiso zokuhle zibe design yakho.